Dota2Update 7.20 – Map Analysis – By Aung Ye Maw – Gaming Kwee
Aung Ye Maw>
Dota2Update 7.20 – Map Analysis – By Aung Ye Maw
Post category:Aung Ye Maw / Dota 2
Dota2Update 7.20 – Map Analysis by Ko Aung Ye Maw. Facebook Page Yahooyeeha https://www.facebook.com/yahooyeehadotasuggestion/
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက Version အသစ်တစ်ခု ထွက်လာတိုင်းမှာ
“Bye Bye Dota 2”
“wtf IceFrog” စသည်ဖြင့် ပြောပြောနေကြတာ Player တွေရဲ့ ထုံးစံတစ်ခုပါ။ ၁ ပါတ်လောက် ကြာသွားရင် သူတို့ပြောတဲ့ ဒီ Imba Map ကလည်း ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီး ကစားစရာရှိတာ ဆက်ကစားရတာပါပဲ။ 6.82, 6.84, 6.86, 6.88, 7.00, 7.07 စတဲ့ Version တွေ ထွက်ခဲ့တုန်းကလည်း ပုံမှန်အတိုင်း Bye Bye Dota2ခဲ့ကြပေမယ့် အချိန်တန်တော့လည်း အိုကေသွားကြတာပဲမလား။
ဒါကြောင့် ဒီ Version အကူးအပြောင်းမှာ သိသိသာသာ ခွဲထွက်သွားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ အများအပြားရှိနေရင်တောင် အချိန်တန်ရင် အသားကျသွားမယ့် Map ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အရင်တုန်းက စိတ်တောင် မကူးမိတဲ့ Talent စနစ်လို လုံးဝ အသစ်တွေ ပါလာတုန်းကတောင် နားလည်အောင် လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။ ဒီတစ်ခေါက် Ability Rework တွေက ကိုယ်တွေ သိပြီးသား Hero တွေအပေါ်မှာပဲ ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်လို့ New Journey Update နဲ့ ယှဉ်ရင်တောင် တော်တော်လေး နည်းတဲ့ အပြောင်းအလဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်ကျလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအပြောင်းအလဲတွေကို အသားကျအောင် လေ့လာရမှာပါ။
ဒီတစ်ခေါက် အပြောင်းအလဲမှာတော့ Ability Rework တွေ တော်တော်လေး များပါတယ်။ New Item ၅ ခုနဲ့ Item Rework တွေ၊ Map Change တွေ အပြင် Root, Cleave စတဲ့ Mechanics ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတွေ၊ Gold Gain , Armor Calculation တွေ အပြင် “Leash” ဆိုတဲ့ Mechanics အသစ်တစ်ခုကိုလည်း မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
အပြောင်းအလဲတွေရဲ့ ပထမဆုံး အချက်ကတော့ မြေပုံပါ။
>> One and Only Map <<
>> All3Levels of Jungle and Lanes changed. <<
Dota မြေပုံတစ်ခုကို အနိမ့်အမြင့်ခွဲခြားတဲ့အခါ Base ကို ဖယ်လိုက်ရင် အမြင့်၊ အလတ်၊ အနိမ့်ဆိုပြီး Level (၃) ခု အဖြစ် မြင်နိုင်ပါတယ်။
Secret Shop၊ Side Lane ၂ ခု စသည်တို့က အမြင့်
Jungle, top Shrine, Mid Lane တို့က အလတ် နှင့်
River, Roshan Pit တို့ဟာ အနိမ့် စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မြေပုံဟာ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ပြောင်းလဲရတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ အရင်က ဘယ်ညာ Main လမ်းကြီး ၂ ခုက အမြင့်မှာ ရှိပြီး Jungle ဟာ Level တူ (သို့မဟုတ်) ပိုနိမ့်တဲ့အခြေအနေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခု မြေပုံမှာတော့ Jungle ၄ ခု စလုံးဟာ အမြင့်ရောက်သွားပြီး Main လမ်း (၃) ခု စလုံးက အောက်ကို ရောက်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
(မြင်သာအောင် ကြည့်ချင်ရင် Radiant bottom Tier2Tower နဲ့ Dire Top Tier2Tower နားတို့က လှေခါးထစ် မရှိတော့ပါဘူး။ Side Main လမ်း ၂ လမ်း စလုံးဟာ Mid Lane ရဲ့ အမြင့်ရဲ့ ရေပြင်ညီ တန်းတူဖြစ်သွားပြီး Base နဲ့ တန်းတူ အမြင့် မရှိတော့တာ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရပါတယ်။ ဒါဟာ Main လမ်းကို တစ်ဆင့်နှိမ့်လိုက်မှန်း အရမ်း မြင်သာတဲ့ အချက်ပါ။)
ဒါဟာ မျက်စိတ်ရှုတ်စရာပေမယ့် IceFrog ဟာ Game ကို Balance ဖြစ်အောင် စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Jungle တိုင်းဟာ နဂိုထက် မြင့်သွားတဲ့အတွက် Map Control အပိုင်းမှာ သိသိသာသာ စကားပြောသွားမှာဖြစ်ပြီး Midgame Ganking နဲ့ Late Game Counter Control အခြေအနေကို များစွာ ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။
– ဥပမာ –
အရင် Map အဟောင်းတုန်းက သင်က Radiant ဖြစ်ပြီး Radiant ဘက်ခြမ်း အပေါ်တောက Shrine နားမှာ Creep စားမယ်ဆိုပါစို့။ သင့်ကို လာ Gank မယ့် Enemy တွေဟာ Bounty Rune Spot ကနေ Smoke နဲ့ ကျော်လာရင် သင် ဘယ်လိုမှ သိလိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Vision Range ထဲကို ဝင်လာမှန်းသိရတဲ့အချိန်မှာ Dire တွေက High Ground Advantage ရှိနေတဲ့အတွက် သင်သတိထားမိချိန်မှာ တော်တော်လေး နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ပြီး Ganking ဟာလည်း Defensive ထက် Attacking က ပိုအားသာနေမှာပါ။
အခုလို Jungle တွေ အားလုံးက လမ်းတွေထက် မြင့်သွားတဲ့အတွက် ဒီလို အခြေအနေမျိူးမှာ သင့်အနေနဲ့ သင့် Jungle ကို Control ယူထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် အ Gank ခံရရင်တောင် ရေပြင်ညီ အတူမှာ Gank ခံရတဲ့အတွက် တုန့်ပြန်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုများသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန့်ပြူးနေတဲ့ Jungle အပြင် Tranquil Boots ရဲ့ Normal Attack ဟာလည်း Hp Regen ကို Cooldown မလည်စေတော့တဲ့အတွက် Axe, Centaur, Tide တို့လို့ Passive Daamge Dealer တွေအနေနဲ့ Afk Jungler အဖြစ် ပြန်မြင်လာရဖို့ အလားအလာ မြင်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီ Meta ရဲ့ မြေပုံအသွားအလာဟာ Jungle ကို Viable ပြန်ဖြစ်ဖို့ လမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Creep Camp တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ အကွာအဝေးက တော်တော်လေး ဝေးတဲ့အတွက် ဘယ်လိုလာဦးမလဲကတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
Radiant Mid Lane Tier2Tower
Patch တွေ ထွက်သမျှမှာ ပြောင်းလဲဖို့ အသင့်ဆုံး နေရာက အဆိုပါ Tower တည်နေရာပါပဲ။ ဒီ Tower နေရာလေးဟာ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် Radiant ဘက်က Dire ထက် Win Rate ပိုများနေရတဲ့ Advantage တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ အကြောင်းက Map အဟောင်းမှာ Tier3နဲ့ Tier2Tower ၂ ခု ကြားထဲက Tower Attack Range ၂ ခု ဟာ ထိကပ်နေတဲ့အတွက် လမ်းလျှောက်စရာ နေရာလွတ် မရှိပါဘူး။ Dire ဘက်အခြမ်းမှာတော့ နေရာလွတ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အဆိုပါ Tower ကို ညာဘက်နည်းနည်းကပ်ပေးပြီး ဘယ်ဘက်က သစ်ပင်တွေကို လမ်းဖောက်ပေးလိုက်တာဟာ Radiant Advantage ကို လျော့ချလိုက်တာနဲ့ ထပ်တူညီပါတယ်။ ဒါကြောင့် Dire အသင်းက Mid Lane ကို Push တိုင်း Radiant ဘက်က အားသာချက်ရနေတာကတော့ အဆုံးသတ်သွားပြီလို့ ယူစ လို့ရပါတယ်။ အခုတော့ Dire ဘက်ကလည်း Tier2Mid Tower ကို တိုးတဲ့အခါ လုပ်ကွက် အသစ်တွေ ရှိလာတော့မှာပါ။
Dire Team Top Bounty Rune
ရုတ်တရပ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီ Bounty Rune တစ်ခုတည်းက မြောင်းထဲကို ရောက်နေတဲ့အတွက် Dire ဘက်က အားနည်းချက်လို့ ထင်စရာ ရှိကောင်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Spot ဟာ Radiant ဘက် Hero တွေကို Bait ဖို့ လွန်စွာမှ ကောင်းပြီး Vision အသာစီးရစေဖို့အတွက် Dire ကို အားသာပေးထားတဲ့ မြေပုံဖွဲ့စည်းမှုလို့ မြင်ပါတယ်။
Mid Lane Side Creep Camp
Mid Laner တွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းပါ။ အထူးသဖြင့် Dire Mid အတွက် သတင်းကောင်းပါ။ Mid Lane ကိုယ်စီရဲ့ အနီးဆုံး Camp တွေဟာ Large Camp တွေမဟုတ်တော့ဘဲ Medium Camp တွေ နဲ့ အစားထိုးထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ဖက်အသင်း Mid က Creep Aggro အသာစီး အယူခံလိုက်ရင်တောင် အနီးဆုံး Camp မှာ Creep သွားစားလို့ရပါပြီ။ အရင်က ဒီ အားသာချက်ကို Radiant ဘက်ကပဲ ရှိပြီး အခုမှ သာတူညီမျှဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
No More Creep Pull
လက်ရှိ မြေပုံ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကြည့်ရတာ အစောပိုင်း လမ်း Creep နဲ့ တော Creep ကို တိုက်တဲ့ Creep Pull တွေ လုပ်ဖို့ တော်တော်လေးကို မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ (Dire Top Lane တစ်နေရာပဲ သစ်ပင်တွေကို ကိုက်ပြီး ဆွဲကြည့်ရင် ရမလားမပြောတတ်ပါဘူး) ဒါကလည်း လက်ရှိ 2-1-2 Meta ကို အဆုံးသတ်စေမယ့် လက္ခဏာလို့ သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ Lane တစ်ခုစီမှာ စောင့်ကြည့်ပေးရမယ့် Creep Experience Deny ဆိုတာကို လုပ်ခွင့်မရှိတော့တဲ့အတွက် Lane မှာ Hero ၂ ကောင် ထိုင်နေမယ့် အစား Tri, Jungle စတဲ့ ကစားပုံတွေက ပြန်အသက်ဝင်လာဖို့ အလားအလာ ရှိပါတယ်။
Tower Hug / Mid Game Map Control.
အရင်က ဘယ်ညာ Main လမ်း ၂ခု စလုံးဟာ အမြင့်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် Tower Defense လုပ်တဲ့အခါ အန ္တရာယ် သိပ်မရှိပါဘူး။ အခု မြေပုံအပြောင်းအလဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Tier2Tower တွေ အားလုံးဟာ ရှေ့ရော၊ နောက်ကပါ ဝင်လု့ိရတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ ဖောက်ပေးထားပါတယ်။ Tower Defense လုပ်ရတာ အရင်ကလို လမ်းကြောင်းတစ်ပေါက်တည်းကို ပိတ်ထားရုံနဲ့ အဆင်ပြေတော့မှာ မဟုတ်ဘဲ တိုက်စစ်ဆင်တဲ့ဘက်ကို အားသားချက် ပိုပေးထားတာဖြစ်လို့ Mid Game Map Control က Game ရဲ့ အသက် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Meta တစ်ခုကို ချက်ချင်း ချမှတ်ဖို့ကတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခန့်မှန်း သုံးသပ်ကြည့်ဆဲ ကာလဖြစ်လို့ အမှားပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်း နေ့လည်ပိုင်းလောက်ရောက်ရင်တော့ Dotacinema တို့၊ HolyHexor တို့လို Channel တွေကနေ Hero Ability Rework Video တွေ၊ Item Rework Video တွေ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းကို အဲဒါတွေကနေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက် အသေးစိတ်တွေကိုတော့ နောက်အပိုင်းတွေမှာ ခွဲပြီး ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မိမိနှစ်သက်သလို နားလည်ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုဆောင်းပါကို Dota2အကြောင်း အမြဲတန်းဖော်ပြပေးနေတဲ့ နေတဲ့ ကိုအောင်ရဲမော် (Page) ကနေ ကူးယူထားပါတယ်။ ဘော်ဒါတို့ Dota2အကြောင်း သိချင်တာ ဖတ်ချင်တာ ရှိရင်သူ့ရဲ့ ဒီ Page မှာ ဝင်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်…
နောက်ပြီးတော့ Share ချင်တယ်ဆိုလည်း ကိုအောင်ရဲမော်ရဲ့ Original Article ဖြစ်တဲ့ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2210406475866060&set=a.1391739117732804&type=3&theater ကိုလည်း Share နိုင်ပါတယ်။
Next Postအပြိုင်အဆိုင် တော်တော်ရှိတဲ့ Best E-Sports Game of the Year 2018